Ukuqhaqha umqhubi weHadoop Ingxoxo | YOQEQESHO
Ukuqhaqha umqhubi weHadoop Ingxoxo-into oyifunayo nokwenzayo?
UCracking Hadoop umcebisi unxibelelwano
Yintoni i-Hadoop yonjiniyela?
Hadoop unceda njani?
Iingcebiso kunye neendlela zokuqhayisa intetho yeHadoop
U-Apache Hadoop ungumkhululi, umthombo ovulekile; Isakhiwo senkqubo esekelwe kwiJava ngokucwangcisiweyo ngokucwangciselwe ukugcinwa kwendawo egcinwe kunye nokusabalalisa ukulungiswa kwemilinganiselo emininzi yolwazi ngokubanzi olubizwa ngokuba yiDig Data. Inokuthi ithathelwe njengokhetho olukhethiweyo kwinqanaba lakho ukunikela ixesha lokunyusa ulwazi olufunekayo lwe-Hadoop kunye nesicelo sayo ukuze uvelise ngokukhawulelana nodliwano lwe-Hadoop.
Kwimihlathi ehamba kunye nathi sifanele sithathe i-gander kwinqanaba elijolise kakhulu ekufuneka uyikhumbule kwimeko apho unqwenela khona umhlaba onobuchule kunye nomsebenzi onyakazayo njengomqhubi weHadoop.
Kwimeko apho unesitsha esitsha kwisifundo, makhe siqale ngethuba lomqhubi wezinto kunokuba ngumthuthukisi weHadoop. Enyanisweni kukho ukungafani ngokungazenzisiyo phakathi kokubini bobabini abajongene nokuqamba iikhowudi kunye neenkqubo. Uluhlu oluphambili kukuba u-Hadoop umqambi usebenza kwi-Big Data environment. Ulwazi oluthe xaxa lubhekisela kwimimandla emininzi yolwazi elinganiswe kwi-petabytes, i-exabyte kunye ne-zettabyte, eyadlulileyo yamandla okusingatha ulwazi lwesintu ngokulungiselela izicelo.
Umbono ogqithiseleyo kakhulu weHadopop kukuba unokusingatha imilinganiselo eninzi yolwazi. Amashishini abasebenza kwezokhenketho, inshuwalense yezenhlalakahle, imali, ukupapashwa, kunye nokunye kufuneka iHadoop ukuba yenze, ibeke iliso, idibanise iphinde ibambe imiqulu eninzi yolwazi.
Kwinqanaba elinye, u-Hadoop ubeka isohlwayo. Kuthetha ukuba kunika intuthuko engapheliyo njengoko isakhelo sihamba ngokukhawuleza siye kwenye indawo kwimeko yesakhiwo esilahlekileyo.
Njengomcimbi wokubaluleka kokuqala udinga ulwazi oluninzi lweempawu zecokethi, iintetho, imilinganiselo, imigangatho, njalonjalo eyenza iHadoop. Konke ngokukodwa kufuneka ube nekhono lokusebenzisa olo lwazi. Ukongezelela, gxininisa amakhono akho olwalamano kunye nenjongo onokuyithuthukisa ngayo imbono yakho ngendlela evelisayo. Yiba nolwazi kunye nesithuba sakho kwaye uzigcine uqhutywe ngaphaya kweendlela ezikhoyo kunye ezilindelekileyo kule ndawo. Gcinani engqondweni akukho nto ithatha indawo yomsebenzi okhutheleyo, kunye nezinto ezichanekileyo kunye nomsebenzi okhutheleyo, unokwenza ngokucacileyo indlela yokufumanisa umsebenzi wakho wefantasy njengomqhubi weHadoop kumgangatho ophezulu.
Ulawulo lweHadoop - Isikhokelo esigqibeleleyo